Izindaba - Ukuhlaziywa nokubikezelwa kwesimo sokungenisa nokuthekelisa saseChina ngo-2021
Ukuhlaziywa nokubikezelwa kwesimo sokungenisa nokuthekelisa saseChina ngo-2021
Ngaphansi kwesimo sokulinganisa ukuthi ubhadane lomhlaba wonke luyalawulwa, umnotho womhlaba ululama kancane, futhi umnotho waseChina ukhula ngokuqinile, kulinganiselwa ukuthi ukungeniswa nokuthekeliswa okuphelele kweChina ngo-2021 kuzoba cishe ngamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezine zamadola aseMelika, unyaka nonyaka ukukhula cishe kwama-5.7%; okuthe, ukuthekelisa okuphelele kuzoba cishe ama-2.7 trillion amadola aseMelika, ngokukhula konyaka nonyaka cishe ngama-6.2%; inani elizongeniswa elizweni lizoba cishe ama-dollar ayizigidigidi ezi-2.2 zamadola aseMelika, ngokukhula konyaka nonyaka cishe okungama-4.9%; kanti insalela yokuhweba izoba cishe ngama-5% ama-76.6 amadola aseMelika. Ngaphansi kwesimo esinethemba, ukukhula kweChina kokuthekelisa nokungenisa amazwe ngonyaka ka-2021 kukhuphuke ngo-3.0% no-3.3% ngokulandelana ngokuqhathaniswa nesimo sokulinganisa; ngaphansi kwesimo sokungabi nathemba, ukukhula kwe-China ukuthekelisa nokungenisa emazweni angaphandle ngo-2021 kwehle ngo-2.9% kanye no-3.2% ngokulandelana ngokuqhathaniswa nesimo sokuma.
Ngo-2020, izindlela zokulawula i-coronavirus pneumonia yaseChina zazisebenza ngempumelelo, futhi ukuhweba kwangaphandle kwaseChina kwaqala ukucindezelwa, futhi nezinga lokukhula landa unyaka nonyaka. Umthamo wokuthekelisa ngo-1 kuya kuNovemba uzuze ukukhula okuhle ngo-2.5%. Ngo-2021, ukukhula nokungeniswa kwempahla eChina kusabhekene nokungaqiniseki okukhulu.
Ngakolunye uhlangothi, ukusetshenziswa kwemithi yokugoma kuzoba nomthelela ekuvuseleleni umnotho womhlaba, inkomba yama-oda amasha okuthekelisa kulindeleke ukuthi ithuthukiswe, futhi ukusayinwa kwesivumelwano esibanzi sokusebenzisana kwezomnotho (RCEP) kuzosheshisa ukuhlanganiswa kwezohwebo phakathi kweChina ne amazwe angomakhelwane; ngakolunye uhlangothi, igagasi lokuvikelwa kwezohwebo emazweni athuthukile alinciphi, kanti nomqedazwe waphesheya kwezilwandle uyaqhubeka nokubila, okungaba nomthelela omubi ekukhuleni kwezohwebo eChina.